Shan Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii El Clasico Ee Xalayto Iyadoo Real Madrid Ay Camp Nou Ku Garaacday Barcelona | Hangool News
Shan Waxyaabood Oo Laga Bartay Kulankii El Clasico Ee Xalayto Iyadoo Real Madrid Ay Camp Nou Ku Garaacday Barcelona
Hangoolnews:– Real Madrid ayaa soo laabasho cajiib ah sameysay kulankii xalayto ee El Clasico iyadoo goolal ay dhaliyeen Karim Benzema iyo Cristiano Ronaldo ay guusha ku hogaamiyeen ka dib markii Gerard Pique uu hogaanka u dhiibay kooxda martida loo ahaa.
Waxaanaynu eege doonaa shan waxyaabood oo laga bartay kulankii xalayto iyadoo Madrid ay 7 dhibcood ka dhigtay farqigii u dhaxeeyay iyaga iyo Barcelona.
Barca waa koox la garaaci karo
40 kulan iyo lix bilood ayaa laga joogaa tan iyo markii ay Barcelona dhadhamisay guuldarro, laakiin daciifnimada daafacooda marka orod iyo kubad rogaalcelis ah lagu helo ayaa banaanka la soo dhigay iyadoo Madrid ay dhalin kartay shan gool nusa saacihii ugu danbeeyay ee ciyaarta ka dib markii qeybta hore ee ciyaarta ay wacdarro dhigeen kooxda heysata koobka Champions League.
Ronaldo oo aamusiyay dadka dhaleeceeya
Cristiano Ronaldo ayaa sii dheereystay hogaanka gooldhalinta La Liga ee xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay goolkiisii 43aad ee tartamada dhan ee xilli ciyaareedkan, waxaana uu aamusiyay dadkii soo jeedinayay in Ronaldo uusan waxtar laheyn kulamada waa weyn ee xilli ciyaareedkan.
Xiddiga reer Portugal ayaa soo bandhigay tayadiisa isagoo si fiican u dhameystiray karooskii uu ka helay Gareth Bale ciyaarta oo shan daqiiqo ay ka harsan tahay, waxaana uu ahaa goolkii 16aad ee uu ka dhaliyo Barcelona.
Daal ayaa ka horjoogsan kara Barca inay seddexda koob mar kale hanato
Ma ahan wax kama ku dhacay in hal habeen ay wada muuqbeelaan seddexda weeraryahan ee Barcelona Lionel Messi, Luis Suarez iyo Neymar maalmo yar ka dib markii ay dhamaantood ka soo laabteen South America iyagoo isreebreebka Koobka Adduunka u soo ciyaarayay xulalkooda.
Farqiga u dhaxeeya sida ay Barcelona u heysatay ciyaarta qeybtii hore iyo awooda ay la soo baxday Real Madrid qeybtii labaad ayaa aheyd mid si weyn u muuqata.
Barca ayaa durbaba 13 kulan in ka badan Real Madrid ciyaartay xilli ciyaareedkan, inkastoo ay weli faa’ido weyn u heystaan hanashada horyaalka hadana daalka faraha badan ee ay wajahayaan ayaa soo gabagabeyn kara rajadooda ah inay noqdaan kooxdii ugu horeysay ee difaacata Champions League tan iyo markii magacaas loo bixiyay.
Zidane oo soo bandhigay awoodiisa tababarenimo
Habeen ay Barcelona xus u sameyneysay nin leh awood tababarenimo oo ay adag tahay in la helo bedelkiisa John Cruyff, Zinedine Zidane ayaa soo bandhigay caalamadihii ugu horeysay ee uu ku noqon karo si la mid ah.
Madrid waxaa lagu ceebeystay guuldarro 4-0 oo ka soo gaartay Barcelona horaantii xilli ciyaareedkan, laakiin waxay xalayto ahaayeen kuwa si weyn isagu dheelitiran iyadoo Zidane uu qaatay go’aan geesinimo leh oo uu kursiga keydka ku dhigay James Rodriguez iyo Isco isagoo ka doorbiday burburiyaha khadka dhexe Casemiro.
Waxaa intaas sii dheer, in difaacashadiisa adag iyo in kubado rogaalcelis ah la raadiyo uu ku najaxay labadii gool ee ay heshay kooxda martida aheyd.
Ramos la iskuma haleyn karo
Zidane ayaa u baahnaan doona inuu go’aan weyn dhawaan gaaro iyadoo kabtanka Real Madrid Sergio Ramos uu weli ku jiro xilli ciyaareed mashaqo u leh, isagoo casaan la siiyay kulankiisii labaad ee isku xigta ee horyaalka iyo markiisii 21aad oo uu casaan qaato.
Daafaca reer Spain ayaa nasiib aad u weyn ku lahaa inuu ka badbaaday jaale labaad daqiiqadii 25aad ee ciyaarta, haddii Raphael Varane uu taam u yahay kulanka ay arbacada u safrayaan Wolfsburg, daafac dhexe oo ay iska garab ciyaaraan xiddiga reer France iyo Pepe ayaa u muuqda mid ka fiican kan haatan haddii Madrid ay dooneyso inay guul ka gaarto Champions League.